Vaovao - Fitaovana famonoana afo vita amin'ny rivotra voahidy, ny famonoana afo simika
Fitaovana famonoana afo vita amin'ny rivotra vita anaty kitapo
Miaraka amin'ny fandrosoana haingana ny fizotran'ny maoderina dia mihasarotra hatrany ny raharaha afo. Manokana indrindra, ireo orinasan-tsolika dia misedra loza bebe kokoa amin'ny fizotry ny famokarana isan'andro. Raha vantany vao misy lozam-pifamoivoizana simika mampidi-doza, dia tampoka, miparitaka haingana ary be dia be ny fahavoazana. , Misy fomba maratra marobe, tsy mora ny mamantatra, sarotra ny famonjena, ary voaloto ny tontolo iainana. Ho setrin'ny tranga tsy ampoizina toy ny tontolon'ny gazy misy poizina sy manimba, ny famonjena amin'ny toerana kely, ny ady maika amin'ny karazana afo isan-karazany, ary ny fandotoana ny fandotoana simika, dia matetika ny fitaovan'ny tsirairay no mitana andraikitra lehibe.
Ny fampivoarana ny fitaovana famonoana afo sy fanapoahana afo an'ny tsirairay dia somary mihemotra ary voafetra amin'ny fomba fanodinana tsindry ratsy. Nesorina tsikelikely io toro lalana mamoaka fo io noho ny vokany tsy mahaliana. Ny fitsipika fanamafisana ny tsindry miabo miorina amin'ny caf (compress air foam) dia nanjary nalaza kokoa teo amin'ny sehatry ny ady afo sy ny fandotoana ny afo.
1. Fampifangaroana ny fiasan'ny rivotra sy ny fandroahana afo mba hiarovana ny fiarovana anao manokana
Ny fitaovana famonoana rivotra sy kitapom-batsy mamoaka afo dia mampifangaro ny fitaovam-pisefoana amin'ny rivotra amin'ny famonoana afo. Rehefa ampiasaina, ny sarontava miaina dia manakana ny entona misy poizina ateraky ny fandoroana sy ny fandotoana simika tsy hanimba ny vatan'olombelona. Ny sarontava dia mandray varavarankely tokana sy varavarankely lehibe. Ny masomaso fahitana, amin'ny alàlan'ny fifehezana ny fitarihana ny onjam-pohana entona, dia mahatonga ny solomaso hazava sy hazavana mandritra ny fampiasana ny saron-tava feno, miaro ny tarehy nefa tsy manakana ny tsipika fahitana.
Ny fitsipiky ny fivoarana tsindry miabo tsara an'ny fitaovana ity dia mahatonga ny foam-bolo ho mafy orina ary avo ny multiplier. Aorian'ny rakotry ny famafazan'ny vatana iray manontolo ny olona ao amin'ny sehatry ny afo dia azo atao ny miaro azy ireo amin'ny fahasimban'ny lelafo ary miaro tsara kokoa ireo mpandraharaha sy ireo zavatra fikarohana sy famonjena.
2. Ny famolavolana knapsack dia mety entina
Ny fitaovana famonoana rivotra-fofonaina sy afo mamono afo dia mandray ny famolavolana knapsack ary mora entina. Ny fitaovana dia votsa amin'ny firafitra, haingana mihetsika amin'ny lamosina, tsy misy tanana, manampy amin'ny fiakarana sy famonjena, ary afaka mamaly ny filàn'ny mpandraharaha mba hanao asa vonjy maika sy ny fanaovana détontamination amin'ny lalana sy tery tery. Ity firafitra ara-drafitra ity dia mahatonga ny fitaovana mpb18 mety ho an'ny terrains sy fampiharana sarotra maro karazana. Tena malalaka.
3. Haavo famonoana afo avo
Ny fitaovana famonoana rivotra sy rivotra mifono rivotra ampiasaina miaraka dia manana ny laharam-pamonoana afo 4a sy 144b, izay mihoatra ny fahaizan'ny famonoana afo matetika amin'ny famonoana afo. Ity fitaovana ity dia afaka mamono afo mirehitra 144 litatra noho ny doro lasantsy sarotra.
4. Halavirana lava
Satria ny taratra hafanan'ny loharanom-afo dia manahirana ny olona hanatona azy, sarotra ho an'ny mpamono afo tsotra ny mampiasa ny fahaizany mamono afo tanteraka. Ny halaviran'ny spray an'ny fitaovana famohana rivotra sy rivotra mifono rivotra roa dia 10 metatra, izay avo telo heny noho ny famonoana afo vovoka maina ary 5 heny noho ny famonoana afo Times. Azo antoka kokoa ho an'ireo mpandraharaha ny famonoana afo lavitra ny loharanom-afo, ary milamina kokoa ny toe-panahin'izy ireo, izay manatsara tokoa ny fiadiana amin'ny afo.
5. Famenoana sy famerenana miverimberina eny an-toerana
Ny fitaovana famonoana rivotra sy fofona afo-kitapom-batsy dia tsy entin'ny tsindry, noho izany dia azo fenoina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Ny akoran'ny barika dia fanoherana ny harafesiana ary mety hofenoina rano madio, rano an-dranomasina, sns. Rehefa avy nanondraka rano iray famonoana afo dia namoaka rano teo akaiky teo ianao, ary afangaro amin'ny ranon-tsavony tany am-boalohany. Azo ampiasaina indray izy io nefa tsy mampihetsika, ary avo roa heny ny fahaizan'ny famonoana afo.
6. Fiantohana an-keriny momba ny fizotra telo
Ny sosona voalohany amin'ny fiarovana: ny fampiasa rivotra roa-miaina sy ny famonoana afo dia mampiasa varingarina entona mitambatra vita amin'ny fibre karbonika. Ny varingarina entona dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny maivana, ny tsindry avo lenta ary ny fampisehoana avo lenta. Ity no varingarina Gas fiarovana avo lenta an'izao tontolo izao.
Ny ambaratonga faharoa amin'ny fiarovana: ny fihenan'ny tsindry ataon'ny fitaovana dia miaraka amin'ny valizy fiarovana mba hiarovana ny tsindry famoahana ny fihenan'ny tsindry amin'ny famoahana be loatra. Rehefa mihoatra ny 0.9mpa ny tsindry famoahana dia hisokatra ho azy ny valizy fiarovana mba hiarovana ny tsindry hiarovana ny mpandraharaha amin'ny tsindry avo.
Ny ambaratonga fahatelo amin'ny fiarovana: ny refy fanerena dia entina eo amin'ny tratran'ny mpandraharaha, ary misy fitaovana fampandrenesana tosika ambany. Rehefa ambany noho ny 5.5mpa ny tsindry ataon'ny gazy gasikara dia hampaneno fanairana maranitra ny fanairana hampahatsiahivana ny mpandraharaha fa tsy ampy ny tsindry amin'ny varingarina entona ary miala amin'ny toerana ara-potoana.
7. Madio sy sariaka amin'ny tontolo iainana
Ny vovoky ny mpamono afo vovoka maina dia mandoto ny tontolo iainana ary manelingelina ny lalan-pisefoana ataon'ny olombelona. Mety sempotra izy io rehefa ampiasaina amin'ny tontolo tsy dia tsara mihodina ny rivotra. Ny kitapom-batsy mifoka rivotra sy mamono afo dia mamono fitaovana misy tanjona roa ampiasaina amin'ny maso ivoho multifunctional tia namana. Ny sombin-tsifotra dia tsy misy fahasosorana amin'ny taovam-pisefoanan'ny olombelona sy ny hoditra. Hihasimba voajanahary ao anaty ora vitsivitsy ny sombin-javatra ary tsy handoto ny tontolo iainana manodidina. Mora ny manadio eo an-toerana aorian'ny fampiasana azy. Nanatanteraka ny politikam-pirenena momba ny fampandrosoana ny tontolo iainana.
8. Tombony fanadiovana
Ny kitapom-batsy mifoka rivotra sy mamono afo manaparitaka afo misy tanjona roa ihany koa dia manana tombony miharihary amin'ny fandotoana noho ny toetra mampiavaka azy. Ny barika dia manohitra ny lozisialy ary azo nofenoina ny vahaolana fanalefahana mifanaraka amin'izany araky ny karazana poizina; azo esorina ny nozora ary mora soloina. Ary manana ny toetra mampiavaka ny atomika tsara, ny fihaonan-dàlana amin'ny fivezivezin'ny zavona, ny faritra lehibe ary ny firaiketam-po mahery. Miaraka amin'ny fiasan'ny fiantsoana azy manokana, dia afaka mamono olona, ​​fiara, fitaovana ary fotodrafitrasa, loharanom-pahalotoana sns, izy io, ary manilika ny loharanon'ny aretina ary misoroka ny fihanaky ny fahalotoana.
9. Tombony azo amin'ny famakiana sy fisorohana ny korontana
Lasa fitaovam-piadiana amin'ny fisorohana rotaka ny fampidirana mpiasan'ny mahasosotra amin'ity fitaovana ity. Ny halaviran-drivotra 10 metatra sy ny fahaizan'ny 17l dia miantoka ny fahafaha-misoroka mafy ny vokatra.
Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny famonoana afo, simika, fandefasana, solika, fitrandrahana harena ankibon'ny tany ary departemanta hafa, ho an'ny mpamono afo na mpamonjy voina hanao soa aman-tsara amin'ny ady amin'ny afo, famonjena, fanamaivanana ary famonjena amin'ny faritra maro miaraka amin'ny setroka, gazy misy poizina, etona na tsy fahampiana oksizenina. Asa fanampiana.